Golovkin vs. Alvarez – Feedhyahanno Kala Badin Kari Waayey
HomeBoxingGolovkin vs. Alvarez – Feedhyahanno Kala Badin Kari Waayey
Gennady Golovkin oo haysta rikoodhka feedhka miisaanka dhexe ee adduunka ayaa barbar dhac muran dhaliyey la galay Saul Canelo Alvarez, ciyaar ka dhacday Las Vegas, USA.
Saddexdii xaakim ee ciyaarta hayay ayey laba ka mid ah la kala safteen labada ciyaartoy oo midna uu guul u calaamadiyey midka kale, laakiin garsooraha saddexaad ayaa calaamadiyey barbar dhac, waxaanay taasi keentay in ciyaarta loo aqoonsado inay barbar dhac ku dhamaatay.
Garsooraha koowaad ayaa qoray in Alvarez uu ku badiyey 118-110, laakiin garsooraha labaad ayaa isaguna shaaciyey in Golovkin uu ku badiyey 115-113, halka garsoorka saddexaad uu soo bandhigay barbar dhac 114-114 ah.
Markii lagu dhawaaqay natiijada ayaa garoonka T-Mobile Arena ee ay ciyaartu ka dhacday, waxa uu isla oogsaday qaylo lagu diiddan yahay natiijada ciyaarta.
Kazakh Golovkin oo 35 ah, ayaa haysta feedhka WBA, WBC iyo IBF, hal marna lagama badinin 38 jeer ee ugu dambeeyey ee uu dagaallamay.
Alvarez ayaa isaguna u dhashay waddanka Mexico, da’diisuna waa 27 jir, waxaana bilowgii ciyaarta uu ku furay dardar iyo inuu jihada ka lumiyey Golovkin, laakiin isaguba kama liidanin ee dhawr jeer ayuu feedh la helay.
Garsoore Adalaide Byrd ayaa warqaddii rikoodhka uu ku qorayay ku sheegay in Alvarez uu si caddaan ah u guuleystay, waxaase ka duwanaaday garsoore Dave Moretti oo guul u calaamadiyey Golovkin, halka Dan Trella uu barbar dhac ku dooday.
Alvarez intii uu xirfadda feedhka ku jiray wuxuu ciyaaray 52 jeeer, wuxuu badiyey 49 jeer oo u badan feedhadhka miisaanka hoose, laba jeer oo barbar dhac ahna wuu xoogsaday. Waxa guul-darro usoo hoyatay hal kulan oo kaliya.
Markii ay ciyaartu dhamaatay, waxay Golovkin iyo Alvarez isku raaceen inay raalli ka yihiin inay mar labaad feedhtamaan, taas oo guddida maamulka feedhku ay abaabuli doonaan ciyaar ku celis ah oo ay labadan nin ku kala bixi doonaan.
Manchester Oo Xaqiijisay Heshiiska Pogba
08/08/2016 Abdiwahab Ahmed
Liverpool Oo Soo Afjartay Inkaartii Ka Haysatay Southampton
13/01/2018 Abdiwahab Ahmed